အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားများ အပြင်သို.ထွက်ခွာခွင့်မရရှိဘဲတားမြစ်ခံခဲ့ရ
ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားများ အပြင်သို.ထွက်ခွာခွင့်မရရှိဘဲတားမြစ်ခံခဲ့ရ
ယနေ. 3.9.2012 နံနက်ပိုင်း က ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန မှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်သည် ဒဂုံတက္ကသိုလ် သို.လာရောက်ခဲ့ရာအံ့သြဖွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ရောက်လာလျှင်အတန်းထဲတွင် ကျောင်းသားများမရှိဘဲအတန်းပျက်ကြကြောင်းကိုသိရှိသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် မေဂျာအတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများရှိနေစေရန်ရည်ရွယ်လျက်နံနက်၁၀နာရီဝန်းကျင်မှ နေ.လည်၁၂နာရီအချိန်အထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ
များသည်မိမိတို.မေဂျာတွင်းမှအပြင်သို.ထွက်ခွာခွင့်မရရှိဘဲတားမြစ်ခံခဲ့ရပါသည်။အချိုမေဂျာများဆိုလျှင် အဆောင်တံခါးကို ပိတ်ထားသည်အထိ အခြေအနေဆိုးရွားခဲ့သည်။အချို့ဆရာမများဆိုလျှင်Tutorial(ကျူတိုရီရယ်)ဖြေနေသော ကျောင်းသားများကိုဒုဝန်ကြီးလာလျှင်Tutorial(ကျူတိုရီရယ်)ကိုစာရရ်ျအားကျိုးမာန်တက်ဖြေနေ ဟန်ဖြင့်နေကြရန်အကယ်၍စာမရပါကလည်းအရှေ့မှဖြေဆိုပြီးခဲ့သောစာများကိုပြန်လည်ကူးချနေရန်ကြိုတင်မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်သို့ဦးတည်ချီတက်နေစဉ်မှာထိုသို့ပွင့်လင်းမှုမရှိသောအပြုအမူများမှာမဖြစ်သင့်တော့ကြောင်း၊ထိုသိုပြုမူလိုက်ခြင်းသည်လက်ရှိဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင် နေသောနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကိုအခက်အခဲဖြစ်စေသည့်အပြင်လက်ရှိအဆင့်အတန်းနိမ့်နေသောပညာရေစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင်များစွာအခက်အခဲဖြစ်စေကြောင်းဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှပြောကြားခဲ့သည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:39 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook